ओलीको प्रश्न- ५६ जना मन्त्री किन चाहियो ? | We Nepali
ओलीको प्रश्न- ५६ जना मन्त्री किन चाहियो ?
वीनेपाली | २०७४ असोज ४ गते ०:२४
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आज चाँगुनारायणमा आयोजना गरेको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै । कार्यक्रममा राप्रपाका क्षेत्रीय अध्यक्ष सहित २६६ जना एमाले प्रवेश गरेका थिए । तस्वीर ः रमेश गिरी, भक्तपुर, रासस
भक्तपुर, ३ असोज । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर ५६ जना पु¥याएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ ।
आज चाँगुनारायण नगर कमिटीले आयोजना गरेको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका ओलीले राज्यले थेग्नै नसक्ने गरी मन्त्रीको सङ्ख्या थपेको बताउनुभयो । ‘यो गरिब देशमा ५६ जना मन्त्री किन चाहियो ?’ ओलीले भन्नुभयो ।
निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उल्लङ्घन भयो, यसो गर्नु भएन, निर्णय सच्याऊ भनिरहे पनि सरकारले नसुनेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
चुनाव नगर्ने षडयन्त्रमा सरकार लागेको बताउँदै उहाँले दलबीच पहिला नै सहमति भएको विषयलाई प्रधानमन्त्रीले मतपत्रको बखेडा झिकेर चुनाव बिथोल्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो । चुनाव नहुने षडयन्त्रलाई एमालेले कुनै हालतमा सफल हुन नदिने उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा विभिन्न पार्टी परित्याग गरी एमाले प्रवेश गरेकालाई अध्यक्ष ओलीले टीका, माला र खादा लगाएर स्वागत गर्नुभएको थियो ।